China Vaccum Food Packaging Bag ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebu ya | Leadpacks
Vaccum Food Packaging akpa
Agụụ nkwakọ nri na-enyere aka na-Efrata ọhụrụ na njikere iji.
Akpa agụụ a na-eme ka ọ dị mfe ịchekwa mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ọhụrụ yana anụ na anụ ọkụkọ. Akụkụ dị mkpa nke sous vide nri, akpa nkwakọ akpa bụ ihe kwesịrị-inwe mgbakwunye na kichin ọ bụla na-enwe olileanya ịgbasa nhọrọ nhọrọ ha iji tinye efere sous. Ọ dịkwa oke mma ịkwakọba akpa nkwakọ akpa maka mkpa nchekwa nri gị niile!
Ezigbo maka nchekwa nri ogologo oge
● Ìhè, Mmiri, Oxygen Ihe mgbochi na mgbapu eguzogide ọgwụ
Maka nsonaazụ kacha mma, chekwaa nri na-adịghị mmiri mmiri
Bags Akpa akara akpa maka nchebe kacha mma
Bar Ihe mgbochi ikuku na-egbochi ịdị ọhụrụ na ụtọ mbụ, isi, na agba nke ihe nri gị echekwara
Agụụ agụụ bụ usoro nke nkwakọ ngwaahịa na-ewepụ ikuku site na ngwugwu tupu akara. Usoro a gụnyere (iji aka ma ọ bụ na-akpaghị aka) itinye ihe na ngwugwu ihe nkiri plastik, na-ewepụ ikuku site na imechi ngwugwu ahụ. Adalata ihe nkiri na-mgbe ụfọdụ na-eji nwere uko kwesịrị ekwesị ka ọdịnaya. Ebumnuche nke ikpo ọkụ na-abụkarị iwepụ oxygen site na akpa iji gbatịkwuo ndụ nke ihe oriri na, yana ụdị ngwugwu na-agbanwe, iji belata olu nke ọdịnaya na ngwugwu.
Agụụ agụụ na-ebelata ikuku ikuku, na-egbochi uto nke nje aerobic ma ọ bụ fungi, na igbochi evaporation nke ihe ndị na-agbanwe agbanwe. A na-ejikarị ya echekwa nri akọrọ ruo ogologo oge, dị ka ọka, mkpụrụ, anụ a gwọrọ, cheese, anwụrụ anwụrụ, kọfị, na ibe nduku (crisps). N’oge dị mkpụmkpụ karị, enwere ike iji nchịkọta mkpofu chekwa nri ọhụrụ, dịka akwụkwọ nri, anụ, na mmiri mmiri, n’ihi na ọ na - egbochi uto nje.
Nkebi Aha Vaccum Food Packaging akpa
Ihe onwunwe PA / Pee, PITA / Pee, naịlọn wdg
Ngwa Mkpụrụ osisi / akwụkwọ nri / nri mmiri / anụ / anụ ọkụkọ wdg
Njirimara Nri / Oyi kpọnwụrụ / Microwaved / Ike
Akwụkwọ ISO-9001, FDA test report / SGS test report wdg.
Oge Mbuga ozi Ẹnam ekese na 15-20 ụbọchị mgbe ugwo
Nke gara aga: Kraft Guzosie Pouches
Osote: Rice agụụ Packaging Bag
Omenala nri Packaging akpa
Food Packaging akpa
Food Packaging Plastic akpa
Food Packaging Ziplock akpa